မိတ်ကပ် - ဘီဇီယာ | Bezzia
ဆောက်တည်ပုံ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုအထူးသဖြင့်အရေပြားပေါ်တွင်ကောင်းမွန်သောအသွင်အပြင်ဖြင့်အလှဆင်ရန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလှအပအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောကဏ္ is တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားထိမိခဲ့သောဗေဒဆိုင်ရာသီလများကိုဖော်ပြရန်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့တိုးတက်လာသောချို့ယွင်းချက်များကိုဖုံးကွယ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အကြောင်းအများကြီးပြောလိမ့်မယ် အခြေခံမိတ်ကပ်၎င်း၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများသို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်ချက်များကို; ကွဲပြားခြားနားသောရှိပြီးသားမျက်လုံးအစင်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်လုံးအမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်လုံးများကိုမီးမောင်းထိုးပြရန်အကောင်းဆုံးနည်းဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ်နှုတ်ခမ်းနီများနှင့်သူတို့၏ဆိုးကျိုးများနှင့်ဆိုးကျိုးများ။ အတိုချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်မင်းတို့အကြောင်းပြောမယ်
နှုတ်ခမ်းနီမိတ်ကပ်နှုတ်ခမ်းသည်မျက်နှာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နေ့စဉ်၎င်းကိုဂရုမစိုက်ပါက၎င်းတို့ကိုခြောက်သွေ့ခြင်း၊ ဖြတ်ခြင်းနှင့်အက်ကြောင်းများတွေ့နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဖက်ရှင်အရောင်များဖြင့်ဖြစ်စေနှုတ်ခမ်းမိတ်ကပ်အမြဲတမ်းထားရှိရန်မှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ခရမ်းရောင်၊ ပန်းရောင် (သို့) carmine (သို့) ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့သူလိုနှုတ်ခမ်းကိုရေဓာတ်ပြည့်ဝအောင်မပေးနိုင်တာကြောင့်နွေရာသီကဆောင်း ဦး ရာသီအထိအပူချိန်ပြောင်းလဲမှုကို ဦး ဆုံးခံစားခဲ့ရလို့ပါ။ နှုတ်ခမ်းမိတ်ကပ်သည်မည်သည့်အမျိုးသမီးအိတ်တွင်မဆိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုထိတွေ့နိုင်ပြီးမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုစုံလင်နိုင်သည်။ ယခုနှစ်ရာသီအားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်များနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသောနှုတ်ခမ်းနီမိတ်ကပ်ထုတ်ကုန်များကိုပြသပါသည်။
ညမိတ်ကပ်: Night night makeup မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်အသားအရောင်ပိုပြင်းတဲ့မိတ်ကပ်လိမ်းခြယ်တာဟာညဘက်မှာပုံမှန်အားဖြင့်ညဘက်ထွက်လေ့ရှိတဲ့နိုက်ကလပ်တွေမှာအလင်းရောင်ရှိတဲ့အပြင်အလှအပကိုထင်ရှားစေတဲ့အချက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ သူတို့ကအသွင်အပြင်နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်တစ်ခုလုံးကိုနှစ် ဦး စလုံးမှပိုမိုတက်ကြွဖော်ပြချက်ပေးသောကြောင့်, အမျိုးသမီးတိုင်းအဘို့အကြီးမြတ်ဖြစ်ခြင်း, ကတန်ဖိုးထားတယ်။ ဒါကြောင့်ညနေခင်းမိတ်ကပ်အတွက်မင်းကြည့်ရတာပိုမိုရှုပ်ထွေးပြီးဖန်တီးမှုကိုဖြစ်စေရန်အမှောင်အရောင်များနှင့်အရောင်များကိုအမြဲရွေးချယ်သင့်သည်။ ညဘက်မိတ်ကပ်အတွက်ကြယ်ပွင့်သည်ရွှေဖြစ်သည်။
မျက်လုံးဖွင့်ထား: ပုံမှန်အတိုင်းမိတ်ကပ်အကြောင်းပြောသောအခါကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်နှာအချို့နေရာများကိုအခြားနေရာများထက် ပိုမို၍ ထင်မြင်စေလိုသည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယေဘုယျအားဖြင့်မျက်လုံးများတွင်အလင်းရောင်နှင့်အရောင်များကိုအထူးသဖြင့်အပြင်အဆင်အဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းတို့သည်အရိပ်များ၊ ကြည့်ရှုရန်အမြင့်ဆုံးဖော်ပြပေးသည့်မျက်တောင်တပ်ဆင်ခြင်း။ သင်၏မျက်လုံးများကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တည်ဆောက်ရန်လာသောအခါ၎င်းတို့သည်ပိုကြီးလာသည်၊ အတူတူနီးကပ်လာသည်၊ မစုံလင်မှုများကိုပြုပြင်ရန်သို့မဟုတ်သင်၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီပုံသွင်းရန်လေ့လာသင်ယူနိုင်သည့်အချိန်တွင်ဤအချက်များကိုသင်သိနိုင်သည်။ အကြောင်းမှာမိန်းမတိုင်းသည်ကမ္ဘာကြီးဖြစ်ပြီး မိတ်ကပ်မျက်လုံးများသည်မျက်နှာတစ်ခုစီအတွက်အထူးဖြစ်ပြီးအရောင်များနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအမျိုးမျိုးဖြင့်သူတို့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသည်။
အရေပြားမိတ်ကပ်: ကျွန်ုပ်တို့၏အသားအရေကိုကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံရန်အထိခိုက်မခံသောအသားအရေကိုမပျက်စီးစေနိုင်သောမည်သည့်မိတ်ကပ်ကိုအသုံးပြုရမည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားရမည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အသားအရေမိတ်ကပ်နှင့် ပတ်သက်၍ စျေးကွက်တွင်အမျိုးအစားများနှင့်အမှတ်တံဆိပ်များစွာကိုတွေ့နိုင်သည်၊ အကျိုးမရှိ အသားအရေမိတ်ကပ်နှင့် ၀ တ်ဆင်မှုများကို ၀ ယ်သည့်အခါတွင်လည်းသင့်အနေဖြင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းကိုအသုံးပြုသည့်အခါသင်၏အသွင်အပြင်များကိုမီးမောင်းထိုးပြပြီးမှိုင်းကျစေမည်မဟုတ်ပါ။ ဒါကြောင့်အသားအရေမိတ်ကပ်အကြောင်းပိုမိုသိရန်တွန့်ဆုတ်မနေပါနှင့်, အရောင်များနှင့်ပုံစံများကိုနှစ် ဦး စလုံး, မိတ်ကပ်ချွတ်ခြင်းနှင့်ခေတ်မီဖြစ်ခြင်းမှကြွလာသောအခါကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်လာ, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရေးကြီးသောအရာအရေပြားကိုအများဆုံးဂရုစိုက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့အတွက်မိတ်ကပ်: တစ်နေ့တာ၏မိတ်ကပ်အားလုံးသည်နူးညံ့သောအရောင်များဖြင့်ဖြစ်သင့်သည်၊ အနည်းငယ်ပိုလန်းနေခြင်းအပြင်၊ အများအားဖြင့်ပန်းရောင်၊ အပြာသို့မဟုတ်အညိုရောင်အရိပ်များကိုသာအသုံးပြုပြီးအလင်းရောင်အရင့်အစဉ်အမြဲရှိသင့်သည်။ နေ့။ ထို့ကြောင့်အသားအရေပေါ် မူတည်၍ အရေပြားအရောင်ပေါ် မူတည်၍ အရည်၊ ခရင်မ်သို့မဟုတ်အမှုန့်များပေါ် မူတည်၍ တစ်နေ့တာအတွက်မိတ်ကပ်လိမ်းသင့်သည်။ ပြီးပြည့်စုံသောနေ့အတွက်မိတ်ကပ်ပြီးအောင်လုပ်ပါ။ လိမ္မော်ရောင်သည်ပြင်ဆင်သူများအတွက်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် (သို့) အသွင်အပြင်ကိုမီးမောင်းထိုးပြရန်အတွက်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်တစ်နေ့တာအတွက်မိတ်ကပ်ဖြစ်ခြင်းကိုရပ်တန့်စေပြီးကောင်းသောထင်မြင်ချက်ကိုပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အရိပ်ဖြေ - နေရာကောင်းတစ်ခုရရင်ကမ္ဘာပေါ်ရှိမိတ်ကပ်အားလုံးထက်ကောင်းသည်ဟုပြောကြသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုရွေးချယ်စရာ၏အားသာချက်ကိုယူရမည်။ တစ်ခါတစ်ရံမှောင်မိုက်အရိပ်များသည်မျက်နှာကိုအလှဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့မပြချင်သောအလင်းများသို့မဟုတ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖုံးအုပ်ရန်သာအသုံးချသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့တခါတရံကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သော်လည်း၊ ၎င်းတို့အားမည်သည့်နေရာနှင့်မည်သို့နေရာချရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိရမည်။ ဒီနေရာမှာဒီရွေးစရာကိုအပြည့်အဝနဲ့အပြည့်အ ၀ ခံစားနိုင်မှာပါ။ အကောင်းဆုံးသောထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ်သင်ရှာဖွေနေသည့်အရာနှင့်အသင့်တော်ဆုံးသူများကိုအသုံးပြုခြင်း။ လှည့်ကွက်များကိုမိတ်ကပ်အမျိုးမျိုးတွင်လည်းတွေ့နိုင်ပြီးသင့်အရိပ်များကိုကောင်းမွန်သောအရင်းအမြစ်ဖြစ်စေရန်အချို့ကိုသင်နှစ်သက်နိုင်သည်။
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးကွက်ရှိအကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များနှင့်အိမ်တွင်မတူညီသောမိတ်ကပ်များကိုရရှိရန်အတွက်အကြံဥာဏ်များပေးလိမ့်မည်။ The အကောင်းဆုံးမိတ်ကပ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, အကောင်းဆုံးပစ္စည်းများကိုခံစားရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်လက်ရှိစျေးကွက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိနိုင်သောအရာနှင့်ဆက်စပ်သည်။
အတွင်းနှင့်အပြင်ကိုလှပပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိရန်လွယ်ကူစေရန်ခေါင်းစဉ်များ၊ သိလိုစိတ်၊ အကြံပြုချက်များနှင့်အခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များ။ ဤတွင်သင်ရှာတွေ့လိမ့်မည် စုတ်တံaeyelash curlers, ကတစျဆငျ့ နှုတ်ခမ်းဆိုးဆေးတောင့် အကောင်းဆုံးအမှတ်တံဆိပ်၏။
ဒါကြောင့်ဒီအာကာသထဲကိုကြည့်တဲ့အခါသင်တွန့်ဆုတ်မနေသင့်ပါ အကောင်းဆုံးမိတ်ကပ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ပြင်ပအလှအပကိုခံစားရန်နှင့်သင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိလူများအားသင်၏အကောင်းဆုံးမျက်နှာကိုကမ်းလှမ်းရန်ကြိုးစားသောအမျိုးသမီးအတွက်ဖြစ်သည်။ သံသယမရှိဘဲ, ဒီမှာသင်တွေ့လိမ့်မည် ဆင်တူတဲ့ဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးသောအဘို့ မိတ်ကပ်.
မိတ်ကပ်လိမ်းရန်နည်းလမ်းများ၊ အကြံဥာဏ်များနှင့်လှည့်ကွက်များအကြောင်းအနည်းငယ်သိရန်အမြဲတမ်းကောင်းသည်။ သို့မှသာကျွန်ုပ်တို့သည်ပြီးပြည့်စုံသောမိတ်ကပ်နှင့်အတူလမ်းများပေါ်ထွက်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ဒီမှာသင်တစ် ဦး စီးရီးရှာတွေ့နိုင်ပါသည် မိတ်ကပ်လှည့်ကွက် အဖြစ်ငယ်ရွယ်နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူမိန်းကလေးများအဘို့စံပြအဖြစ် မိတ်ကပ်လှည့်ကွက် အစွန်းအထင်းများသို့မဟုတ်ရိုးရိုးမိတ်ကပ်လှည့်ကွက်များကိုဖယ်ရှားရန်ဖြစ်သည် နှာခေါင်းသေးသေးသင်၏မျက်နှာကိုမတူကွဲပြားသောအသွင်အပြင်ရှိစေရန်မိတ်ကပ်အမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုပါ။ သင်၏မိတ်ကပ်ကိုမှန်ရှေ့တွင်မည်သို့ကိုင်တွယ်ရမည်ကိုသင်သိရန်စာရင်းကြီးတစ်ခုမလိုအပ်ပေ။ သို့သော်မည်သည့်အရာကမျှသိရန်မလွယ်ကူပါ။ မိတ်ကပ်လှည့်ကွက် မည်သည့်ပေးထားသောအခိုက်အဘို့။ ဒါကြောင့်ဒီစာကိုသင်လိုက်နာရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့အကြံပေးပါသည် မိတ်ကပ်လှည့်ကွက် မင်းဖြစ်ချင်ရင် အကောင်းဆုံး တစ်နေ့လုံး
မျက်လုံးအစိမ်းကိုဘယ်လိုဖန်တီးရမည်ကိုသင်သိပါသလား။ သူတို့ဟာအရှိဆုံးကာမဂုဏ်နှင့်အသည်းအသန်ရူပတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာသူမ၏အတွင်း၌ ...
နှာခေါင်းကိုမိတ်ကပ်နှင့်ဖုံးအုပ်ထားခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ မူတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့အားအဆင့်အနည်းငယ်ပေးပါမည်။
ခရစ္စမတ်မိတ်ကပ်စိတ်ကူးများအိမ်တွင် ၀ တ်ရန်။
အိမ်မှာခရစ်စမတ်မိတ်ကပ်တစ်မျိုး ၀ ယ်နိုင်တယ်လို့ဘယ်သူပြောခဲ့လဲ။ ကောင်းပြီဒီနှစ်, အဲဒါကိုထိသောအရာကိုဖြစ်ပါတယ်။ ယခုပင်လျှင်…
သင်၏မျက်လုံးကိုဖွင့်ခြင်းသည်သင်အချိန်ကြာမြင့်စွာကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်သောနည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံးတော့၊ ငါတို့လွှမ်းမိုးသည်အထိ ...
သင့်ရဲ့ကြိမ်လုံးပေါ်သို့ဖောင်းမချခြင်းမှ Mascara ကိုကာကွယ်နည်း
por Susana godoy လွန်ခဲ့တဲ့ 10 လအတွင်း .
မိတ်ကပ်အကြောင်းပြောတဲ့အခါ Mascara ပျောက်နေမှာမဟုတ်ဘူး။ ၎င်းသည်ထိုအခြေခံနှင့်လိုအပ်သောဆက်စပ်ပစ္စည်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
မျက်နှာဖုံးများ ၀ တ်နေစဉ်သင်၏မျက်လုံးပေါ်တွင်မိတ်ကပ်လိမ်းရန်နည်းလမ်း ၄ နည်း
ကျနော်တို့မိတ်ကပ်ဖြည့်စွက်ရန်လိုသည့်အခါသင်၏မျက်စိပေါ်တွင်တင်အမြဲအကြီးအခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်လအနည်းငယ်အတွင်း ...
ဒီဆောင်း ဦး ရာသီ 2020 အတွက်မိတ်ကပ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းကဘာတွေလဲ။
ဆောင်း ဦး ရာသီရောက်ခါနီးပြီ နွေရာသီကိုပိုကြာရှည်စွာကြိုက်ချင်သော်လည်း ...
Bobbi Brown ၏ထုတ်ကုန်များအတွက် ၃၀% လျှော့စျေးကိုလက်မလွတ်ပါနှင့်
por Susana godoy လွန်ခဲ့တဲ့ 11 လအတွင်း .
Bobbi Brown သည်အလှကုန်အမှတ်တံဆိပ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်အချို့ ...
ဝက်ခြံ - ကြီးမားသောဝက်ခြံကိုမည်သို့ဖယ်ရှားရမည်နည်း
အလွယ်တကူနှုတ်ခမ်းတဝိုက် blackhead ဖယ်ရှားပါ